အိမ်တွင်းသုံး - iHome ► Shopping Time
မူလသို > လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ>အိမ်တွင်းသုံး
ကုန်ပစ္စည်း 417 ခု ရှိပါသည်
ံHacker အမှတ်တံဆိပ် ခြင်ပြေးစက်
Super Wide အမှတ်တံဆိပ် ခြင်/ယင် ရိုက်တံ (SW-102)
Portable Lithium Battery Fan ( Model No - BEJ-F2201 ) လေထုတ်ပေးမှုအားကောင်းပြီး သေသပ်လှ ပစွာ ပြုလုပ်ထားပါသည်။ အခုလိုပူပြင်းတဲ့နွေရာသီမျိုး မှာ ပန်ကာလေးရှိနေတော့ နွေရာသီရဲ့ အပူဒဏ်ကို လည်း မကြောက်ရ တော့ဘူးပေါ့။
Portable Fan အရည်အသွေး ကောင်းမွန်သော Cooling Table Fan လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အရှိန် အတိုး၊ အလျော့ လုပ်နိုင်ပြီး လွယ်ကူ ရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။
Mini Air Coolerပူအိုက်တဲ့အချိန်တွေမှာ မိမိတကိုယ်ရည်အတွက်အေးချမ်းအောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် Mini Air Cooler လေးပါ။
Duwon Digital Safe Guard
6-Ways TV-DVD L 190xW 56xH 114 mm
Washing Machine L 114xW 56xH 190 mm
Refrigerator L 114xW 56xH 190 mm
Shundi အမှတ်တံဆိပ် ခြင်ဖမ်းစက်
(1) အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး ကြာရှည်စွာ အသုံးခံခြင်း (2) လျှပ်စစ်အားပြီးလျှင် ကြာရှည်စွာအသုံးပြုနိုင်ခြင်း (3) ခြင် ၊ တခြားရောဂါပိုးမွှားများကိုပါ ဖယ်ရှားပေးခြင်း
Water Spray Water Spray သည် ပူအိုက်တဲ့အချိန်မှာ မိမိတစ်ကိုယ်ရည်အတွက် အေးချမ်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Mini Fashion Fan လးဖြစ်လို့ ဘယ်သွားသွားအလွယ်တကူ သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။ ပလပ်ကြိုးနဲ့ တိုက်ရိုက်အသုံးပြုရပါသည်။
Mini Air Coller
Mini Air Cooler 1. ပူအိုက်တဲ့အချိန်မှာ မိမိတစ်ကိုယ်ရည်အတွက် အေးချမ်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း ။ 2. AA ဓာတ်ခဲ3လုံးနဲ့အသုံးပြုနိုင်ပြီး USB CABLE လည်းပါဝင်တာကြောင့် ကွန်ပျူတာ ဖြင့်လည်းတွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ။ 3. ရေခဲတုံးလေးများထည့်ပြီးလည်း အသုံးပြုနိုင်ခြင်း ။ 4. Mini Air Cooler လေးဖြစ်လို့ ဘယ်သွားသွားအလွယ်တကူ သယ်ဆောင်သွားနိုင်ခြင်း ။
လျှပ်စစ် ခြင်ဖမ်းစက် (GM-128)
Air - Con(A)(15A 3Pin& Socket) L 114xW 56xH 190 mm
60W Inverter Charger
Sansui Steam Iron
Philips အမှတ်တံဆိပ် Dry Iron ( HD.1172 ) (1) တခြားမီးပူများထက် အရေအသွေးကောင်းမွန်ခြင်း (2) ကြာရှည်စွာ အသုံးပြု ခံခြင်း (3) ယုံကြည်စိတ်ချစွာ အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
Electric Iron ( NI-317T ) >Dry Iron,Wattage:1000W >Non-Stick Coating Soleplate >Light Weight (0.9Kg)
2 in 1 အမှတ်တံဆိပ် အလိုအလျောက် အမှိုက်လှဲစက် ဒီအမှိုက်လှဲစက်လေးကတော့ အိမ်ရှင်မတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အမှိုက်လှဲစက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ကလေးနဲ့ လိုက်တွန်းပေးရုံဖြင့် လက်ညောင်းသက်သာစေပါသည်။
ZEP Auto Inverter
100W Auto Inverter Charger